တရုတ်ပြည် လေဥဂိုဏ်း (၁၉၆၆ – ၇၆) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » တရုတ်ပြည် လေဥဂိုဏ်း (၁၉၆၆ – ၇၆)
တရုတ်ပြည် လေဥဂိုဏ်း (၁၉၆၆ – ၇၆)
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Oct 31, 2017 in Best Web Awards, History |2comments
လေးဦးဂိုဏ်း ဆိုသည်မှာ မော်စီတုံးခေတ်နှောင်းပိုင်းကာလ ဩဇာအာဏာကြီးမားသော တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်လေးဦး အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထိုဂိုဏ်းတွင် မော်၏ဇနီး ကျန်းကွင် Jiang Qing နှင့် သူ့ဖော်ကိုင်ဖက် ဝမ်ဟွမ်ဂွမ် Wang Hongwen ၊ ယိုဝမ်ယွမ် Yao Wenyuan ၊ ကျန်ချွန်ကွို Zhang Chunqaio တို့ပါဝင်ပြီး အားလုံးမှာ ရှန်ဟဲမြို့မှ အဓိက ပါတီ တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး (၁၉၆၆ – ၇၆) ကာလတွင် နေရာရလာပြီး တရုတ်ပြည် ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တွင် မော်၏ မူဝါဒများအား ဖိဖိစီးစီး အကောင်အထည် ဖေါ်ခဲ့သူများဖြစ်သည်။ ။။။။
ထိုဆယ်စုနှစ်ပိုင်း ကာလအတွင်း မော်၏ ကျန်းမာရေး ယိုယွင်းလာသည့်အခါ အစိုးရ အဓိက ဌာနများကို ၎င်းတို့ အုပ်စီးမိကြသည်။ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး လုပ်စဉ် မူဝါဒနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် လေးဦးဂိုဏ်း၏ ချုပ်ကိုင်မှုနှင့် မည်ရွေ့မည်မ ျှ မော့် သဘောအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်းမှု မရှိပါ။ အစောင့်နီတပ်၏ နိုင်ငံတဝှမ်း ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး အသက်သွင်းမှုက မော်၏ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်မှုကို ပြန်လည်ရှင်သန် အားကောင်းစေသော်လဲ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အန ်တရာယ် ကြီးမားသော မငြိမ်သက်မှုနှင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပွားရသည်။ မငြိမ်သက်မှုများက တိန်ရှောက်ပိန်၊ ဇူအန်လီ၊ ရဲကျန်ရင် တို့ပါဝင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အုပ်စုနှင့် လေးဦးဂိုဏ်းအကြား ရန်မီးစ တောက်လောင်စေသည်။ ၁၉၇၆ စက်တင်ဘာ ၉ရက်နေ့ မော် သေဆုံးသည့်အခါ လေးဦးဂိုဏ်းမှ နိုင်ငံအား ထိန်းချုပ်လိုက်သော်လဲ အဆုံးတွင် အဓိက ဇတ်ဆောင် မည်သူမ ျှ အာဏာ မရခဲ့ကြချေ။ သူ့နေရာ ဆက်ခံသူအဖြစ် မော်ရွေးသူမှာ ယခင် လူသိနဲခဲ့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဝါဒီ ဟွာဂိုဖန်း Hua Guofeng ဖြစ်သည်။ ဟွာက ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး၏ အလွန်အကျွံ ပြုမူချက်များကို လူသိရှင်ကြား ရှုံ့ချခဲ့သည်။ ။။။။
၁၉၇၆ အောက်တိုဘာ ၆တွင် ကျန်းကွင်နှင့် သူမ၏ လ ျှို့ဝှက်အုပ်စုဝင် ဂိုဏ်းသားများအား ဖမ်းဆီးရန် ဟွာ အမိန့်ထုတ်သည်။ တရားဝင် သတင်းစာမှ အဖြုတ်ခံရသော အာဏာပိုင်များကို “လေးဦးဂိုဏ်း” နာမည်ပြောင်ပေးပြီး သူတို့နှင် မော် မကွယ်လွန်ခင် နောက်ဆုံးနှစ်တွင် လမ်းခွဲခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာ ဆိုသည်။ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး၏ အလွန်အကြူး လုပ်ဆောင်ချက်များကို သူတို့တွင် အပြစ်ပုံချပြီး နိုင်ငံတဝှမ်း ပြစ်တင်ရှုံ့ချပွဲများ ကျင်းပသည်။ ။။။။
သူတို့အား ထောက်ခံသည့် ရှန်ဟဲရှိ အဓိကလူများကို ပေကျင်းသို့ အစည်းဝေးတက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ရွေ့ ရောက်ရောက်ခြင်း တန်းဖမ်းဆီးသည်။ ၁၉၈၁တွင် နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှု၊ နိုုင်ငံအား ဆန့်ကျင်သော အခြားရာဇဝတ်မှု စွဲချက်များနှင့် လေးဦးဂိုဏ်းဝင်များအား ရုံးတင်စစ်ဆေးသည်။ စွဲချက်များတွင် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း လူပေါင်း ၃၄၃၇၅ဦး သေဆုံးရမှု အပြင် ခုနှစ်သိန်းငါးသောင်းသော အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများအပေါ် မတရား အနိုင်ကျင့် စီရင်မှုများလဲ ပါဝင်သည်။ ။။။။
လေဥ ပေထု ဂွေရှု တေဘု
ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှာ ရုပ်ပြသက်သက်သာ ဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသား တရားခံသုံးဦး ခုခံချေပခြင်း မပြုခဲ့ပေ။ ဝမ်ဟွမ်ဂွမ် နှင့် ယိုဝမ်ယွမ် နှစ်ဦးစလုံး ရာဇဝတ်မှု စွဲချက်များကို ဝန်ခံပြီး နောင်တရကြောင်း သက်ညှာခွင့် တောင်းခဲ့သည်။ ဇန်ချွန်ကွိုမှာ တလျောက်လုံး အပြစ်မရှိကြောင်း ငြိမ်သက် တည်ငြိမ်စွာ လျောက်လဲသည်။ ကျန်းကွင်မှာမူ သူမအား စစ်ဆေးသော တရားခွင်တလျောက်လုံး ငေါက်ငမ်း၊ ငိုယို၊ ဆူပူ နေပြီး သူမတွင် အပြစ်မရှိကြောင်း နှင့် လင်ယောက်ျားဖြစ်သူ မော်စီတုံး အမိန့်နာခံခြင်း သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း အော်ဟစ်ပြောသည်။ ။။။။
နောက်ဆုံးတွင် တရားခံ လေးဦးစလုံး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခံရသည်။ ဝမ်ဟွမ်ဂွမ်မှာ ထောင်ဒဏ်တသက် ချမှတ်ခံရပြီး ၁၉၈၆တွင် လွှတ်ပေးကာ ဆေးရုံသို့ ပြောင်းရွှေထားပြီး ၁၉၉၂ အမည်ဖေါ်မပြသော အသည်းရောဂါဖြင့် သေဆုံးချိန်ဝယ် သူ့အသက် ၅၆နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ ယိုဝမ်ယွမ်မှာ ထောင်ဒဏ် အနှစ်၂ဝ ချခံရကာ ၁၉၉၆တွင် ပြန်လွတ်ပြီး ၂၀၀၅တွင် ဆီးချိုရောဂါနှင့် ကွယ်လွန်သည်။ ။။။။
ကျန်းကွင် နှင့် ဇန်ချွန်ကွို နှစ်ဦးစလုံးအား သေဒဏ် ချမှတ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တသက်တကျွန်း လျော့ချပေးခဲ့သည်။ ကျန်းကို ၁၉၉၄တွင် သူ့သမီးအိမ်၌ အကျယ်ချုပ် ပြောင်းရွှေ့ချထားပြီး ၁၉၉၁ တွင် သူ့ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်သွားသည်။ သူမတွင် လည်ချောင်းကင်ဆာ ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းများထွက်ပြီး ဆက်လက်ကြာရှည် ခံစားခြင်းဘေးမှ ရှောင်လွှဲရန် သူ့ကိုယ်သူ ကြိုးဆွဲချခဲ့သည်။ ဇန်မှာ ၁၉၉၈တွင် ပန်ကရိယ ကင်ဆာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပြီးနောက် ကျန်းမာရေး အကြောင်းပြချက်နှင့် ထောင်မှ ပြန်လွတ်သည်။ ၂၀၀၅တိုင်အောင် သူအသက်ရှင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ။။။။
လေးဦးဂိုဏ်း ကျဆုံးခန်းက တရုတ်ပြည်သူ့သမတနိုင်ငံအတွက် အပြောင်းအလဲများစွာ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဟွာဂိုဖန်း နှင့် ပြန်လည်နေရာ ရလာသူ တိန်ရှောက်ပိန် ဦးဆောင်မှုအောက် မော်ခေတ်ကာလ အဆိုးရွားဆုံး အလွန်အကျွံ ပြုမူချက်များမှ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယူအက်စ်၊ အနောက်နိုင်ငံများနှင့် သံတမန်၊ ကုန်သွယ် ဆက်ဆံရေးများ ထူထောင်ကာ လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေသော စီးပွားရေး လွတ်လပ်ခွင့် နှင့်အတူ ယှဉ်တွဲရွေ့ တင်းကြပ်စွာချုပ်ကိုင်သော နိုင်ငံရေး စနစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ။။။။
တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးနှင့် နှစ်အူးဂိုဏ်း တည်ထောင်မည့် မြန်တြံ့သဗုံကြောင်
The Gang of Four, or siren bang, wasagroup of four influential Chinese Communist Party figures during the latter years of Mao Zedong’s rule. The Gang consisted of Mao’s wife, Jiang Qing, and her associates Wang Hongwen, Yao Wenyuan, and Zhang Chunqiao. Wang, Yao, and Zhang were all major party officials from Shanghai. They rose to prominence during the Cultural Revolution (1966-76), pushing Mao’s policies in China’s second city.
When Mao’s health began to decline over that decade, they gained control ofanumber of major government functions.
It is not clear how much control the Gang of Four really exercised over the policies and decisions surrounding the Cultural Revolution, and to what extent they simply carried out Mao’s wishes. Although the Red Guards who implemented the Cultural Revolution across the country did revive Mao’s political career, they also broughtadangerous degree of chaos and destruction to China. The unrest sparkedapolitical struggle betweenareformist group, including Deng Xiaoping, Zhou Enlai, and Ye Jianying, and the Gang of Four.
When Mao died on September 9, 1976, the Gang of Four sought to take control of the country, but in the end, none of the major players took power. Mao’s choice and his eventual successor was the previously little known but reform-minded Hua Guofeng. Hua publicly denounced the excesses of the Cultural Revolution.
On October 6, 1976, he ordered the arrest of Jiang Qing and the other members of her cabal.
The official press gave the purged officials their nickname, “The Gang of Four,” and asserted that Mao had turned against them in the last year of his life. It also blamed them for the excesses of the Cultural Revolution, setting offanationwide round of denunciations against Jiang and her allies.
Their major supporters in Shanghai were invited to Beijing foraconference and were immediately arrested as well.
In the end, all four defendants were convicted. Wang Hongwen was sentenced to life in prison; he was released toahospital in 1986 and died of an unspecified liver ailment in 1992 at just 56 years of age. Yao Wenyuan receivedatwenty-year sentence; he was released from prison in 1996 and passed away from complications of diabetes in 2005.
Both Jiang Qing and Zhang Chunqiao were sentenced to death, although their sentences were later commuted to life in prison.
Jiang was moved to house arrest at her daughter’s home in 1984 and committed suicide in 1991. She reportedly had been diagnosed with throat cancer and hanged herself to avoid suffering any longer from the condition. Zhang was released from prison on medical grounds in 1998 after being diagnosed with pancreatic cancer. He lived until 2005.
The downfall of the Gang of Four signaled widespread changes for the People’s Republic of China. Under Hua Guofeng and the rehabilitated Deng Xiaoping, China moved away from the worst excesses of the Mao era. It established diplomatic and trade relations with the United States and other western countries and began to pursue its current course of economic liberalization paired with firm political control.
ဦးကြောင်ကတော့ လေဥကြောင် မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်